Ungazifaka kanjani izithombe ku-Instagram kusuka ku-PC: Kuchazwe isinyathelo ngesinyathelo | Izindaba zamagajethi
I-Instagram isithweswe umqhele njengenye yezicelo ezithandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Inethiwekhi yokuxhumana nabantu inezigidi zabasebenzisi, ngaphezu kokuqhubeka nokukhula ngezinga elihle ngokuhamba kwesikhathi. Ekuqaleni, le nethiwekhi yokuxhumana nabantu yazalwa njengesicelo sefoni. Yize kamuva inguqulo yayo yewebhu yadalwa. Okuvumela ukuphequlula kusuka kukhompyutha ekuyo.
Kancane kancane imisebenzi eyengeziwe yethulwe kule nguqulo yewebhu ye-Instagram. Empeleni iyona okufanele isetshenziswe uma ufuna ukususa i-akhawunti. Omunye wemisebenzi wethulwe ngokufanayo kungenzeka ukulayishwa kwezithombe. Ngakho-ke, ungalayisha izithombe kuphrofayela yakho kusuka kukhompyutha yakho.
Kungumsebenzi ongaba wusizo kakhulu ezikhathini eziningi. Ngakho-ke uma ungenayo ifoni eduzane, noma uma isithombe ofuna ukusilayisha sigcinwe kwikhompyutha yakho, ukusebenzisa lo msebenzi kungaba lula kakhulu. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi lokhu kusebenza kanjani ku-Instagram. Okulandelayo, sizokutshela konke ngendlela ongalayisha ngayo izithombe kunethiwekhi yokuxhumana nabantu kusuka kunguqulo yayo yedeskithophu.
Ungabathola kanjani abalandeli ku-Instagram
1 Faka izithombe ku-Instagram ku-PC
1.1 Faka izithombe kusuka ku-PC uye ku-Instagram: Izinyathelo
2 Umehluko ngokulayisha kusuka ku-smartphone
Faka izithombe ku-Instagram ku-PC
Njengoba kunengqondo, into yokuqala okufanele uyenze ukufaka inguqulo yewebhu yenethiwekhi yokuxhumana nabantu, kulesi sixhumanisi. Kufanele ungene ngemvume ku-akhawunti yomsebenzisi, uma kungakabi khona ukuqala kweseshini. Lapho iseshini isiqalile kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu, kufanele ufake iphrofayili yomsebenzisi. Kwenziwa ngokuchofoza kusithonjana esenziwe ngomuntu phezulu ngakwesokudla. Kuyisithonjana sesithathu kusuka kwesobunxele. Ungaphinda uchofoze igama lomsebenzisi elivela ngakwesokudla kwesikrini. Zombili izinketho zisiholela kuphrofayili. Ngakho-ke singaqala.
Ngakho-ke, lapho sesivele singaphakathi kwephrofayili, sibheka izithonjana ezibonakala kwesokudla segama lomsebenzisi. Lapha ungabona lokho isithonjana ngakwesokunene ikhamera enemivimbo eminingana enemibala, enophawu + ngezansi kwesokudla. Lesi yisithonjana okufanele sicindezele kuso ukuze sikwazi ukufaka izithombe ku-Instagram kusuka ku-PC. Ngakho-ke lapho sichofoza kuso, inqubo yokulayisha isho isithombe esifuna ukusilayisha kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu siqala. Izinyathelo okufanele zilandelwe ziboniswe ngezansi.
Faka izithombe kusuka ku-PC uye ku-Instagram: Izinyathelo
Lapho sichofoza kusithonjana esishiwoyo, into yokuqala esibuzwa yona uma sifuna ukufaka lesi sithombe kuphrofayela noma izindaba. Umsebenzisi ngamunye kufanele akhethe inketho ayithandayo. Kulokhu, esizokukwenza ukulayisha isithombe kuphrofayela yethu ku-Instagram. Ngakho-ke, sikhetha leyo ndlela esikrinini. Le yinkinobho ebonakala ngokuluhlaza okwesibhakabhaka esikrinini.
Okulandelayo, iwindi lizovuleka esikrinini lapho kufanele sisebenze khona khetha isithombe esifuna ukusilayisha ku-Instagram. Lokhu kufana nalapho sifuna ukulayisha izithombe ekhasini lewebhu noma ukuthumela ngeposi. Ngakho-ke, okufanele sikwenze ukuya endaweni ekukhompyutha lapho isithombe okukhulunywa ngaso esifuna ukusilayisha kuphrofayli yethu. Ngakho-ke sisebenzisa umhloli wefayela ukufika kuleyo ndawo ethize. Lapho isitholile isithombe, kufanele uchofoze kuso bese ucindezela inkinobho evulekile kulelo windi.
Ungayilanda kanjani ividiyo evela ku-Instagram
Uma isithombe sesikhethiwe, lesi sithombe sizovela esikrinini sakho ku-Instagram. Isinyathelo sokuqala esinikezwayo ukulungisa ubukhulu baso. Ukuze ilingane nosayizi wesithombe esisithola kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ngakho-ke, kufanele siyinqume futhi siyilungise ngokuya ngalokho esikufunayo. Ngemuva kwalokho singakunika okulandelayo, lapho singaqhubeka khona nokulungiselela ukushicilelwa kwalesi sithombe.
Esinyathelweni esilandelayo singakwazi bese ubhala umbhalo esifuna ukuwufaka lapho kushicilelwa isithombe kuphrofayela yethu. Kuvunyelwe ukufaka umbhalo nama-hashtag uma kwenzeka ufuna ukuwasebenzisa. Ngale ndlela, isithombe ngabe sesivele silungile. Uma sichofoza okulandelayo, isithombe esishicilelwe sizoshicilelwa kuphrofayli yethu kwinethiwekhi yezenhlalo eyaziwayo ngqo. Inqubo manje isiphelile. Isithombe siyabonakala vele kuphrofayili. Ngakho-ke abalandeli bethu bangayibona, bayithande noma bashiye imibono kuyo nganoma yisiphi isikhathi.
Umehluko ngokulayisha kusuka ku-smartphone
Uma usebenzisa i-Instagram njalo, uzobe uqaphele ukuthi kukhona umehluko ocacile kwinqubo yokulayisha isithombe kusuka ku-PC. Ushintsho olukhulu ukuthi uma silayisha isithombe kusuka kukhompyutha, azikho izinketho zokuhlela leso sithombe. Uma ulayisha isithombe kusuka ku-smartphone yakho uye kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu, kunezindlela eziningi zokuhlela ongakhetha kuzo.
Ngaphezu kokushintsha usayizi wesithombe, kungenzeka ukwengeza izihlungi ukuthola umphumela oyifunayo. Ukuze leso sithombe siguqulwe kakhulu. Kepha lokhu akunakwenzeka (okungenani okwamanje) kunguqulo ye-PC ye-Instagram. Ukuphela kwento engenziwa kuleli cala ukulungisa usayizi wesithombe ofuna ukusilayisha. Kepha ayikho enye inketho yokulungisa isithombe, ukwethula izihlungi noma ukwenza izinguquko, ezikhona kunguqulo yaso yangempela.
Ngakho-ke, noma ukufaka isithombe ku-Instagram kusuka enguqulweni ye-PC kuyinto elula, ngaphandle kokuthi ilusizo kakhulu, ayifani. Ukuze labo basebenzisi babe nentshisekelo yokukwazi ukuhlela isithombe esishiwoyo, kufanele ukubheke lokhu. Njengoba uma ufuna ukwazi ukwethula izihlungi esithombeni okukhulunywa ngaso, kuzofanela usebenzise ukulayishwa kwezithombe kusuka ku-smartphone.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amanethiwekhi omphakathi » Ungazilayisha kanjani izithombe ku-Instagram kusuka ku-PC
IHuawei P30 Pro, nansi ifulegi elisha lenkampani yaseChina
Ukuhlaziywa kanye nezici ze-AOC C24G1 yokuqapha yemidlalo